Zvishavane Stars yaomerwa | Kwayedza
Zvishavane Stars yaomerwa
15 Aug, 2014 - 00:08	 2014-08-14T14:39:55+00:00 2014-08-15T00:01:39+00:00 0 Views
CHIKWATA chebhora cheZvishavane Stars icho chiri muDivision 1 chotsvaga rubatsiro rweUS$10 000 rwekuti chikwanise kufambira mberi nemutambo wenhabvu sezvo chakatarisana nedambudziko guru rekushaya mari. Mutevedzeri wasachigaro wechikwata ichi, VaCliff Matenga (40), vanoti pari zvino zvinhu zvakavaomera nekudaro vari kutsvaga rubatsiro.
“Chikwata chedu chinorakidza ramangwana rakajeka zvikuru nekuti tine vechidiki nyanzvi mumutambo wenhabvu, dambudziko ratakatarisana naro hatina mari yekutenga zvinodiwa saka chikumbiro kunyika yose,” vakadaro
VaMatenga. Vanoti havana nhumbi dzekutambisa nhabvu pamwe nezvimwe zvakaita semabhora acho.
VaMatenga vanoti vaimbobatsirwa kare nemumwewo muzvinabhizimisi wemuZvishavane.
“Izvozvi mari yekuti tipotewo tichipa vatambi vedu hatina yekuti vakwanisewo kurarama, vazhinji vavo havana dzimba dzekugara vanodawo pekugara uye chekufambisa chaicho kana tichienda kumitambo yedu hatina motokari. Ose aya matambudziko akatarisana nechikwata chedu anodawo kuti tibatsirwe,” vakadaro.
Zvakadai, VaMatenga vanoti vari kufamba muzvikoro zvakasiyana kuZvishavane, kumaruwa akakomberedza anoti Chivi, Mberengwa nekumwe vachitsvaga vana vechikoro vane zvipo zvebhora vachivabatsira mukusimudzira matarenda avo.
“Mari ikawanikwa tinoda kuti munguva yezororo tipote tichitora vana ava tichivadzidzisa hunyanzvi hwebhora uye nekufamba kwenguva hurongwa hwedu ndehwe kuzovaka chikoro chinodzidzisa bhora chete cheSoccer Academy,” vakadaro.
Zvakadai, chikwata chavo chine vatambi vanokwana makumi matatu pamwe chete.
Kune vanoda kubatsira chikwata ichi vanogona kuridza nhare panhamba dzinoti 0772 987 082, votaura naVaMatenga.